Fifamoivoizana eto an-drenivohitra : Hanomboka ny fanamboarana ny « Fly Over » -
AccueilRaharaham-pirenenaFifamoivoizana eto an-drenivohitra : Hanomboka ny fanamboarana ny « Fly Over »
Tetikasa goavana ny lalambe eto an-drenivohitra ilay antsoina hoe “Fly Over”. Tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izy io, izay lalambe mifanaingina ambony ambany, ohatra ireny any ivelany ireny ny endriny.
Raha ny fanazavana, ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Fanajariana ny Tany sy ny tetikasan’ny Filoham-pirenena (M2PATE) no misahana ny fanatanterahana izany. Araka izany, nambaran’ny minisitra tompon’andraikitra, Narson Rafidimanana, fa hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana io “Fly Over” io. Izany hoe, vantany vao mitsahatra ny orana amin’ny faran’ity volana Avrily ity dia hanomboka ny asa mahakasika izany.
Nomarihin’ny minisitra fa tetikasa hiarahan’ny fitondram-panjakana malagasy amin’ny governemanta Sinoa ity “Fly Over” ity.
Voalaza fa ny Sinoa no mandray ny fanatanterahana ny asa rehetra amin’izany saingy, isika Malagasy amin’ny alalan’ny M2PATE no manao ny fanaraha-maso rehetra. Raha ny fanazavana hatrany, Malagasy avokoa ny 90%-‘ny “sous-traitance” miasa amin’io fotodrafitrasa goavana io. Izany hoe, hanokatra asa maro ho an’ny mponina ity asa fanamboarana ny “Fly Over” ity.
Ankoatra izay, voalaza ihany koa fa hanomboka amin’ny faran’ity volana ity ihany koa, amin’ny fitsaharan’ny orana ny asa rehetra mikasika ireo lalam-baovao, eny Ankasina sy eny Tsarasaotra. Voalazan’ny minisitra mantsy fa nosokafana vonjimaika tamin’ny fandraisantsika ny Fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia fotsiny ihany ireo lalam-baovao ireo fa mbola tsy tena vita tanteraka ny asa. Raha ny fanazavana hatrany, mbola misy sosona tara tokony handrakotra ireo lalam-baovao ireo.